Akụkọ Bible: Jizọs Agwọọ Ndị Ọrịa - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
MGBE Jizọs na-ejegharị n’ala Izrel, ọ gwọrọ ndị ọrịa. A kọrọ akụkọ ọrụ ebube ndị a n’obodo niile dị gburugburu. Ndị mmadụ na-akpọtakwara ya ndị ngwụrọ, ndị ìsì na ndị ntị chiri na ọtụtụ ndị ọzọ na-arịa ọrịa. Jizọs na-agwọkwa ha niile.
Afọ atọ agafewo kemgbe Jọn mere Jizọs baptizim. Jizọs gwara ndịozi ya na n’isi nso, na ya ga-eje Jeruselem ebe a ga-egbu ya nakwa na ya ga-esi n’ọnwụ bilie. Ma Jizọs nọgidere na-agwọ ndị ọrịa.
Otu ụbọchị, Jizọs nọ na-ezi ihe n’ụbọchị Sabat. Sabat bụ ụbọchị izu ike nke ndị Juu. Nwaanyị a ị na-ahụ ebe a anọwo na-arịasi ọrịa ike. Ọ nọ na-ehuru ehuru ruo afọ iri na asatọ, ọ pụghị iguzozi eguzozi. Jizọs wee bikwasị ya aka, ọ malite iguzozi. A gwọọla ya!
Nke a were ndị ndú okpukpe iwe. Otu n’ime ha wee were olu ike gwa ìgwè mmadụ ahụ okwu, sị: ‘E nwere ụbọchị isii bụ́ ndị e kwesịrị ịrụ ọrụ n’ime ha, ha bụ ụbọchị ndị unu pụrụ ịbịa ka a gwọọ unu ọrịa, ọ bụghị n’ụbọchị Sabat!’
Ma Jizọs zara ha, sị: ‘Unu ndị ọjọọ. Unu niile na-atọpụ ịnyịnya ibu unu ma kpọrọ ha gaa ka ha ṅụọ mmiri n’ụbọchị Sabat. Nwaanyị a, bụ́ ogbenye, onye nọ n’ọrịa kemgbe afọ iri na asatọ, ó kwesịghị ka a gwọọ ya n’ụbọchị Sabat?’ Azịza Jizọs mere ka ihere mee ndị ọjọọ ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, Jizọs na ndịozi ya gawara Jeruselem ha na-aga. Mgbe ha ka ruru nnọọ n’azụ obodo Jeriko, ndị arịrịọ abụọ kpuru ìsì nụrụ na Jizọs na-agafe. Ha wee tie mkpu, sị: ‘Jizọs, nyere anyị aka!’
Jizọs kpọrọ ndị ìsì ahụ, jụọ ha, sị: ‘Gịnị ka unu chọrọ ka m meere unu?’ Ha sị ya: ‘Onyenwe anyị, meghee anya anyị.’ Jizọs wee bitụ aka n’anya ha, ha wee hụ ụzọ ozugbo! Ị̀ ma ihe mere Jizọs ji rụọ ọrụ ebube ndị a? Ọ bụ n’ihi na ọ hụrụ ụmụ mmadụ n’anya, chọọkwa ka ha nwee okwukwe n’ebe ọ nọ. N’ihi ya, anyị pụkwara ijide n’aka na mgbe ọ ga na-achị dị ka Eze, ọ dịghị onye ga-arịa ọrịa ọzọ n’ụwa.
Gịnị ka Jizọs na-eme ka ọ na-ejegharị n’ala ahụ niile?
Gịnị ka Jizọs gwara ndịozi ya ihe dị ka afọ atọ ka e mesịrị ya baptizim?
Ole ndị bụ ndị a nọ na foto a, gịnịkwa ka Jizọs meere nwaanyị ahụ?
N’ihi gịnị ka otú Jizọs si zaghachi n’ihe ndị ndú okpukpe ahụ kwuru ji menye ha ihere?
Mgbe Jizọs na ndịozi ya nọ nso na Jeriko, gịnị ka Jizọs meere ndị ìsì abụọ na-arịọ arịrịọ?
N’ihi gịnị ka Jizọs ji rụọ ọrụ ebube dị iche iche?
Gụọ Matiu 15:30, 31.
Olee ụzọ dị ebube Jehova si gosipụta ike ya site n’aka Jizọs, oleekwa otú ọ pụrụ isi metụta otú anyị si ghọta ihe Jehova kwere ná nkwa maka ụwa ọhụrụ ahụ? (Ọma 37:29; Aịsa. 33:24)
Gụọ Luk 13:10-17.
Olee otú eziokwu ahụ bụ́ na Jizọs rụrụ ụfọdụ n’ime ọrụ ebube ya ndị kasị dịrị ịrịba ama n’ụbọchị Sabat si egosi ụdị ahụ́ iru ala ọ ga-ewetara ihe a kpọrọ mmadụ n’oge Ọchịchị Narị Afọ Iri ya? (Luk 13:10-13; Ọma 46:9; Mat. 12:8; Kọl. 2:16, 17; Mkpu. 21:1-4)
Gụọ Matiu 20:29-34.
Olee otú akụkọ a si egosi na ọ dịghị mgbe Jizọs ji nnọọ ọrụ n’aka nke na o nweghị ohere inyere ndị mmadụ aka, gịnịkwa ka anyị pụrụ ịmụta site na nke a? (Deut. 15:7; Jems 2:15, 16; 1 Jọn 3:17)